Alshabaab oo ku Dilay Magaaladda Laamu Sarkaal Kenyan ah – Radio Daljir
Seteembar 12, 2017 4:42 g 0
Askari katirsan Laamaha Amaanka dalka kenya ayaa lagu dilay Magaalladda Laamu ee dalka kenya ,kadib markii ay miino la kacday gaari uu lasocday ,isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo sida ay shegayaan dad goobjoogayaal ah.
Taliyaha Boliska Gobalka Xeebta, Larry Kieng ayaa xaqiijiyey inay Alshabaab ka dambeeyeen qaraxaasi oo uu hal Sarkaal ku geeriyooday, 2-kalena ku dhaawacmeen.
Waxa uu intaasi ku daray in la la’ yahay 5-Askari, kadib, markii la qarxiyey Gaari ay la socdeen 12-Askari. Dhinaca kale, Boliska Kenya ayaa rumeysan inay Alshabaab bedeleen Xeelladii Dagaalka, isla markaana ay Hawlgalo miino la beegsadaan Gaadiidka Ciiddanka Kenya ee ku safra qeybo ka mid ah Goballadda W/bari iyo Xeebta ee dalkaasi iyo Deegaanadda ku teedsan Xadka.
Kooxda Alshabaab ee ku sugan Dalka Kenya ,gaar ahaan Kaymaha ayaa Bilihii ugu dambeyeey Xoojiyeey Weraarada ay u geeysanayaan Ciidamada Dowladdda kenya.